Wershadda Kaluunka ee Xaabo oo Soo Bandhigtey Wax soosaarkeeda (Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Wershadda Kaluunka ee Xaabo oo Soo Bandhigtey Wax soosaarkeeda (Sawiro)
Wershedda Kaluunka soosaarta ee Xaabo waxa ay shaqadeeda bilowdey sanadkan, waana wershad ku shaqeyneysa qalab casri ah soona saarta Kaluun tayadiisu aad u sarayso oo noocya badan, hadaba wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir:
+2525 821222, +25290 737439, +252 90 798919 ama Emailka-sales@habotuna.com
Wershadda Kaluunka ee Xaabo ayaa soo bandhigtey wax soosaarka wershadda oo dhawaan dhidabada loo taagay, waxaana ka soo qaybgalay munaasabadda lagu soo bandhigay wax soosaarka wershadda kaluunka ee Xaabo masuuliyiin ka socda maamulka sare ee Wershadda oo ku taala Xaabo oo wax yar u jirta degmada Caluula ee gobolka Bari.
Maareeyaha guud ee wershadda kaluunka Xaabo Cabdiqani Cali Yusuf oo Horseed Media waraysi ku siiyey gudaha wershadda ayaa sheegay in xiligaan wershaddu ku jirto tijaabo isla markaana, ay furitaanka shaqadu ku soo aadey iyada oo badxiran ah.
Mudane Cabdiqani Cali Yusuf ayaa sheegay in wershadda ay iska leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed, isla markaana ay xiriir la leeyihiin wershadaha kale ee kaluunka ee ku yaala dalka, waxaana aan iska kaashanaa ayuu yiri waxyaabaha naga dhexeeya.
Dhanka shaqo abuurista mar uu ka hadlaayey ayuu sheegay in shaqaalaha wershadda ay gaarayaan ilaa 400 oo qof kuwaas oo u badan dumar, waxaana intooda badan ay ka hawlgalaan gudaha wershadda, sidoo kale waxa uu Cabdiqani Cali Yusuf sheegay in ay ku soo xirmayaan wershadda ilaa 80 laash kuwaas oo kaluunka keeni doona wershadda, iyaduna ay ka mid tahay shaqo abuursita ay sameeyeen.
Maareeyaha shirkadda Habo Tuna Factory Cabdiqani Cali Yusuf ayaa cabasho xoogleh ka muujiyey maraakiibta shisheeye ee sida sharci darada ah u qaata kaluunkii aynu iska lahayn ee ku jirey badaheena, iyaga oo ka imaanaya waddamo shisheeye isla markaana si aan dhuumasho lahayn u daldalanaaya kheyraadkeeni ee ay ahayd in Soomaalidu ka faa’ideysato, ayuu yiri.
Shirkadda Habo Tuna Factory ayaa dhawaan laga dhisey magaalada Xaabo oo 84mile u jirta xeebta Bosaso marka laga cabiro dhanka Badda, waxaa shirkaddu iska leedahay dhisme aad u wayn, waxaana ka shaqeeya khubaro u dhashey dalal kale kuwaas oo garanaaya qaabka loo wado wershadaha, waxaana lagu wadaa in dhawaan kaluunka ay soo saarto loo iibgeeyo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba.
Wefdi ka socda Wershadda Kaluunka ee Xaabo ayaa dhawaan ka qaybgalay shirkii Istanbuul waxaana ay sheegeen in ay halkaas kulamo kula qaateen qaar kamid ah ganacsatada waaweyn ee caalamka kuwaas oo xiiseynaya wax soosaarka Soomaaliya gaar ahaan Kaluunka iyo kheyraadka badda.